Packages - Velvet Luna
Yangon, Ngapali Beach
Yangon, Inlay, Mandalay, Bagan
(7 Days /6 Nights )
YANGON, KAWTHAUNG, NYAUNG OO PHEE ISLAND
Yangon, Kawthaung, Aalua Resort ( Pulo Balu ) Island Trip (Snorkeling)
Yangon, Myeik (Island)
Yangon, Mawlamyine, Hpa-An, Golden Rock, Bago
Yangon, Bagan, Inle, Ngapali (Beach)
Yangon – Kawthaung – Aalua Resort ( Pulo Balu ) Island Trip (Snorkeling)
Yangon – Myeik (Island) Tour
Yangon – Mawlamyine – Hpa-An – Golden Rock – Bago
Yangon – Bagan – Inle – Ngapali (Beach)
Booked my flight to Koh Chang and also booked hotel, hotel was really nice, and did not costalot. overall hadareally good time and was exactly what i was looking for from the trip, thank you vl travels.
i do recommend using vl travels for your trip
Booked my flight to Koh Chang and also booked hotel, hotel was really nice, and did not costalot. overall hadareally good time and was exactly what i was looking for from the trip, thank you vl travels. i do recommend using vl travels for your trip
We plannedatrip to bali with them. They gave really good rates and even customized the trip to our request.
luxury trip တွေကို ဈေးအတန်ဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးနိုင်တယ်...
KHINE MYAL KYAW
စိတ်ရှည်တယ်... တိကျတယ်... luxury trip တွေကို ဈေးအတန်ဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးနိုင်တယ်... အသစ်ပေမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်...
အရမ်းကောင်းပါတယ်လို့ နောက်လဲ ဒီ Tour နဲ့ပဲ ထပ်သွားမယ်။
လေယာဉ်လက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ် ဖြစ်သေချာဂရုတစိုက်နဲ့ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးမှု့တွေကတော့ Best Service ပါပဲ..။ ကျေးဇူး လကတ္တီပါ
JUE WINT KHANT
လကတ္တီပါရေ... ချောင်းသာက ပြန်ရောက်ပါပြီ... ငွေဆောင်သွားမယ်လုပ်လိုက်... ချောင်းသာသွားမယ်ပြောလိုက်နဲ့... ဟိုတယ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက်ချိတ်ပေးရတာ... တော်တော် မောသွားမှာပဲနော်... စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ဂျီကျသမျှ မငြီးမငြူ ဝန်ဆောင်မှုပေးပေးလို့ ကျေးဇူးလည်းတင် အားလည်းနာပါတယ်... ��
Azura ကလည်း အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးပေးပါတယ်...
နောက်နှစ်လည်း အခုလိုပဲ ဂျီကျ ၊ ဂျီးများဦးမယ်နော်...
THINN WYUTYI AUNG
လကတ္တီပါရေ... ချောင်းသာက ပြန်ရောက်ပါပြီ... ငွေဆောင်သွားမယ်လုပ်လိုက်... ချောင်းသာသွားမယ်ပြောလိုက်နဲ့... ဟိုတယ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက်ချိတ်ပေးရတာ... တော်တော် မောသွားမှာပဲနော်... စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ဂျီကျသမျှ မငြီးမငြူ ဝန်ဆောင်မှုပေးပေးလို့ ကျေးဇူးလည်းတင် အားလည်းနာပါတယ်... �� Azura ကလည်း အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးပေးပါတယ်... နောက်နှစ်လည်း အခုလိုပဲ ဂျီကျ ၊ ဂျီးများဦးမယ်နော်...
HadaGreat Honeymoon,
Flight ကော Hotel ကော BoatTrip ကော အကုန်အဆင်ပြေပါတယ်..
HadaGreat Honeymoon, Flight ကော Hotel ကော BoatTrip ကော အကုန်အဆင်ပြေပါတယ်.. အားလုံးအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ။
Velvet Luna Travels and Toursက Mandalay FMမှာလွင့်တဲ့ အစီအစဉ်ကနေ ကံစမ်းမဲပေါက်ခဲ့တယ်။
အဲ့ကနေ ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံး အကုန် စီစဉ်ပေးတယ် အဆင်ပြေရဲ့လားလို့လည်း အမြဲဖုန်းဆက်မေးတယ်။ အရမ်းသဘောကျတဲ့ အချက်လေ ကိုယ်ကမန်းလေးကဆိုတော့ ရန်ကုန်ညရောက်လို့ လမ်းလည်နေလို့ ညဘက်ဖုန်းဆက်မေးတာတောင်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လမ်းညွှန်ပေးတာကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။
ပြီးတော့ velvet luna နဲ့စေတနာက မဲပေါက်လို့ခရီးထွက်ရတာကိုမေ့ပြီး မိသားစုက စီစဉ်ပေးသလိုခံစားရပါတယ်ရှင်
KHAING AYE THANT
Velvet Luna Travels and Toursက Mandalay FMမှာလွင့်တဲ့ အစီအစဉ်ကနေ ကံစမ်းမဲပေါက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ကနေ ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံး အကုန် စီစဉ်ပေးတယ် အဆင်ပြေရဲ့လားလို့လည်း အမြဲဖုန်းဆက်မေးတယ်။ အရမ်းသဘောကျတဲ့ အချက်လေ ကိုယ်ကမန်းလေးကဆိုတော့ ရန်ကုန်ညရောက်လို့ လမ်းလည်နေလို့ ညဘက်ဖုန်းဆက်မေးတာတောင်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လမ်းညွှန်ပေးတာကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ ပြီးတော့ velvet luna နဲ့စေတနာက မဲပေါက်လို့ခရီးထွက်ရတာကိုမေ့ပြီး မိသားစုက စီစဉ်ပေးသလိုခံစားရပါတယ်ရှင် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
New Year ကို ငပလီကမ်းခြေမှာ ဖြတ်သန်းခွင့်ရခဲ့တာ VL ကြောင့်ပါ။ နီးမှကပ်ပြီး စီစဉ်တော့ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ၊ ဟိုတယ်အခန်းတွေ ဘယ်မှာမှ ဝယ်မရခဲ့ဘူး။ Tour တွေရော၊ online မှာရော အကုန်လိုက်စုံစမ်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၃၁ နဲ့ ၁ ရက်နေ့က အရမ်း hot ဖြစ်တဲ့ရက်တွေလေ။ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ လက်လျော့လုဆဲဆဲ VL က မမချောချောလေးတွေ ကျေးဇူးနဲ့ New Year Eve ကို ငပလီကမ်းခြေမှာ အပြတ်ကဲခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒီလို မလွယ်ကူတဲ့ခရီးစဉ်တောင် VL က မဖြစ်ဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ first impression အရမ်းကောင်းသွားတဲ့အတွက် နောက်ဆို ဘယ်သွားသွား VL နဲ့ပဲ သွားတော့မယ်။